Nzvimbo Masks, Isolate Coverall, Kuvhiya kweGlove - Pantex
Disposable Inodzivirira Chiso Mask
Disposable Kuchengetedza Coverall
Disposable Isolate Coverall
Disposable Inodzivirira Yakavharwa (Isiri-Yakachena)
Disposable Yokudzivirira Coverall (Sterile)
Disposable Kuvhiya Gown
Disposable Shangu Yekuvhara
Kurapwa Kuongororwa Magadziko
Medical Nutrile Kuongorora Magloves (Asiri-Akasununguka)
Kurapwa Vinyl Kuongorora Magurovhosi
Latex Kuvhiya Kwenyika (Sterile)
Imwe neimwe inoita mabasa ayo, boka revanhu vane musanganiswa wakaringana wehunyanzvi hwekugona kukutsigira iwe zano rakakodzera, haunetseke nezve dhizaini, kurongeka kwemarongerwo uye kugadzirwa, basa.
2 Maawa Kukurumidza Kupindura
Maawa makumi maviri nemana pamhepo, mhinduro dzinokurumidza mumaawa maviri, dzinokurumidza kupfuura vamwe, kuti vakupe mazano ehunyanzvi uye mhinduro.
1 Mira Kugadzirisa
Isu tine ruzivo rwakakwana rwekugadzira uye kushumirwa, dhizaini / sampling / kugadzira / kuburitsa zvese zvese mukambani yedu, isu tichakubatsira iwe kuve nechokwadi chekuita kwekutenga kwakanaka, Inokuponesa nguva, kushanda nesimba uye kunetseka.
Iine musoro-hofisi Inowanikwa mune yakakurumbira munyika yose inozivikanwa kushanya guta-Hangzhou, Pantex ikambani inyanzvi inoshanda mukugadzira uye kutengesa kwekudzivirira zvigadzirwa nenguo dzakagadzirira uye zvigadzirwa zvakakodzera. Iyo kambani ine showroom neR & D pakati mu Hangzhou uye imwe100%yaive fekitori mu huang shan guta, kune gomo rakanaka kwazvo reChina raivapo, maawa maviri chete nemotokari, 1.5 awa ne High kumhanya yechitima kubva ku Hangzhou. Iyi fekitori yakagadzwa muna 2007.
Powder-Yemahara Medical Nitrile Exam Magloves
Disposable Kurapa Kuvhiya Gown (Sterile)
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota tisiyire email yako uye isu tichava mukubata mukati maawa makumi maviri nemana. Kubvunza KwaPricelist
Unyanzvi hwekusarudza Uye Kutenga Masiki Mu ...
1. Kuvhuvhu kuvharira kushanda Guruva rinovhara kushanda kwemaski kunoenderana nekuvharidzira kwaro guruva rakanaka, kunyanya guruva rinotsika pasi pe2,5 mamagoni. Nekuti ichi chemukati guruva rinogona kuva zvakananga i ...
Izvo Zvakanakira Do Disposable Masks Ine ...
Iye zvino kusvibiswa kwemhepo kuri kuwedzera uye kwakanyanya, vashandisi vazhinji vanopfeka masks, masks ekurasa ndiwo anonyanya kushandiswa nevashandisi pamusika. 1. Chiedza Chiyera Masiki anotsemurwa anoshandiswa kugadzira zvigadzirwa zvakare zvakaringana, ...
Ndedzipi Dzidziviriro Dzokupfeka Mask
1. Pfeka masiki panguva yemwaka wakakura wefuruwenza, mumazuva ehuputi uye guruva, kana uchirwara kana kuenda kuchipatara kunorapwa. Munguva yechando, vanhu vekare vane low low immune, vanorwara ...
Kupa kurwisa nyowani nyongori chirwere